DHALOONNI HAARAAN JIJJIIRAMA FEDHA!!!!
Oduu barattoota Univaristii Jimmaa keessaa bahe.
5. Asiin fuulduraa ilaalchaa Siyaasaa fi gochaa keenyaan Ummataa Oromoo cunqurfamaa kanaa fi sabboontotaa goototaa Oromoo dhugaa Oromummaa isaanii fi Mirgaa Ummataa keenyaa kabachiisuuf qabsoo bilisummaa, nagaa fi dimookiraasii gaggeessuun arsaa kanfalaa jiran yoo deemsaa keenyaan isiin gadisiifneeraa taee dhiifamaa guddaa gaffanna. Akkaa mootummaatti Yakkamtootnii fi Shakkamtootni sanuu angoo irraa bobbaafamani siyaasaa dahoo godhachuun Dallaa Yuunibarsiitii Jimmaa keessaatti yakkaa garaa garaa baratootaa Oromoo irraatti rawwaachaa jiraan seeraatti akka dhiyaataan ammas cimsinee gaafanna. yoo tarkaanfii madaalawaan yeroo dhiyootti hin fudhatamin tarkaanfii mataa keenyaa kan fudhannuu ta’uu ni akeekna. GARAGALCHA -Presidentii Mootummaa Nannoo Oromiyaatiif -Waajjiraa DH.D.U.O Gidduugaleessaaf -Biroo Haqaa fi Naga.